Shirar gaar gaar ah oo magaaladda Kismaayo ku yeesheen Wasiiradda Amniga maamulada Soomaaliya – Madal Furan
Hoy > Warka > Shirar gaar gaar ah oo magaaladda Kismaayo ku yeesheen Wasiiradda Amniga maamulada Soomaaliya
Shirar gaar gaar ah oo magaaladda Kismaayo ku yeesheen Wasiiradda Amniga maamulada Soomaaliya
Kismaayo (Madal Furan) – Maalintii Labaad ayaa waxaa weli ka socda Magaalada Kismaayo shirka madaxda maamul goboleedyada ee Soomaaliya ka jira.
Ajandaha shirkaas ayaa maanta lagu soo waramayaa in ay Hogaamiyayaasha Goboladu kaga hadli doonaan arrimo ay ka mid yihiin ammaanka, sida loo qaybsan doono kheyraadka dalka iyo weliba arrimaha siyaasadda ee dalka Soomaaliya wajahayo.
Kulamo si gooni gooni ah ay isugu arkeen qaar ka tirsan Hogaamiyayaasha gobolada ayaa ilaa Xalay waxaa uu ka socday magaalada Kismaayo, waxaa sidoo kulamo qarsoodi ah yeeshay qaar ka tirsan Wasiirada xukuumadaha Dowladda Goboleedyada.
Wasiirada amniga ayaa qeyb ka ah kulamadii xalay ka dhacay magaalada Kismaayo, waxaana ay isku raaceen inay sameystaan xiriir wanaagsan oo lagu hagaajinayo wada shaqeyn tooda.
Markii uu shalay furmay shirka Madaxda maamuladda Gobolada ayaa Madaxweynayaasha qaarkood waxay jeediyeen khudbado ay si weyn ugu dhaliilayaan Dowladda Federaalka Soomaaliya, waxaana ay banaanka soo dhigeen khilaaf xoog lihi inuu ka dhex jiro Madaxweynayaasha Maamulada qaarkood iyo DFS.
Maalinimada beri ah ayaa la filayaa inuu soo xirmi doono shirkaasi isla markaasnaa laga soo saari doono War-murtiyeed lagu qeexo doono wixii ka baxay ee ay isla gaareen Maamuladu.
Kulankii shalay ayaa madaxda maamul goboleedyada waxay dhaliilo ugu jeediyeen dowladda Soomaaliya oo uu khilaaf kala dhaxeeyo, waxaana shirkaan oo socon doono muddo seddex maalin ah gabogabada laga soo saari doonaa warmurtiyeed ay ku cadeynayaan waxyaabaha ay ku heshiiyeen.
Hoggaamiyaha Daacish-ta Soomaaliya oo ismuujiyey inuu weli nool yahay+Sawiro
Dowladda Qadar oo sahmineysa fursadaha maalgashi ee Soomaaliya
Mareykanka oo ka waramay duqeyntii buuraha G/Bari; Puntland